Ahoana ny fomba hisafidianana shampoo saka? | Noti saka
Ahoana ny fomba hisafidianana shampoo saka?
Fantatsika fa tena madio volom-borona izy ireo, izay mandany ampahany betsaka amin'ny fotoanany amin'ny fanadiovana. Fa ny marina dia raha tsy salama tsara izy ireo dia afaka mijanona tsy manadio, izay vao mainka hiharatsy ny toe-draharaha saka izay mahatsapa fa maloto dia mety hahafoana ny finiavana hiaina. Hatramin'io fotoana io dia zava-dehibe amin'ny namantsika ny fahadiovan'ny tena (na feline, fa tsy 🙂).
Fa ahoana no hisafidianana shampooing saka? Ahoana no ahitanao ny iray izay tena mitandrina ny hoditrao sy ny volonao nefa tsy miteraka tsindrin-javatra?
Mety ho mora ny valin'ireo fanontaniana ireo: mankanesa any amin'ny fivarotana biby fiompy hividy shampooing manokana ho an'ny saka. Fa indraindray tsy dia tsotra loatra. Indrindra fa vao nahita saka nilaozana isika dia matetika no mieritreritra ny handro azy io amin'ny alàlan'ny shampooing antsika, nefa tsy mieritreritra fa mety hanimba ny hodiny amin'ity fomba ity.
Ary ny faran'ny hoditry ny saka dia tsy mitovy amin'ny antsika; raha ny marina dia asidra kely izy io, fa ny an'ny olombelona kosa dia alinalika kokoa. Amin'io ihany dia tsy maintsy mahita shampoo manokana isika. Ny fanontaniana dia, inona?
Misy ho an'ny volo amin'ny karazan-karazany rehetra (lava na fohy), ary misy na tsia. Mba hisorohana ny allergy, Manoro hevitra anao aho mba hahazo shampoo voajanahary, ohatra, avy amin'ny Aloe vera. Amin'izany dia ho azonao antoka fa ho voakarakara tsara ny hoditry ny namanao. Mazava ho azy fa raha tsy azonao dia azonao atao ny misafidy ny hisafidy karazana shampooing araka ny karazana volo ananan'ny volonao.
Ary raha marary izy dia afaka mandro? Tsia. Handro fotsiny ianao raha voan'ny fivalanana ary tena maloto, ary ny faritra amin'ny vatanao ihany no maloto, miaraka amin'ny gauze mando amin'ny rano. Fa raha madio kosa, ny hany zavatra hatao dia ny manadio ny volon'izy ireo amin'ny shampoo maina, izay vovoka manimba ny volonao ary tsy mila manasa.
Etsy an-danin'izany, tadidio fa tsy afaka mandro ny sakao matetika ianao, farafaharatsiny isam-bolana ary raha mbola ataony mazava tsara 🙂. Na izany na tsy izany, eto Manana andiana torohevitra maromaro ianao mba hiezahana hampiarina amin'ny rano ny vodinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Cheats » Ahoana ny fomba hisafidianana shampoo saka?
Edgar gomez dia hoy izy:
Tafandria mandry. Tsy afaka nanakana saka tsy hikorontana amin'ny seza aho. Inona no azoko atao na inona no azoko apetraka amin'ny seza sy ny fandriana mba tsy hikotrehana? Tena mila fanampiana aho.
Valiny tamin'i Edgar Gómez
Raha tsy neutered izy io dia omeko anao izany. Hisorohana azy tsy hikororoka eraky ny toerana ianao.
Ny zavatra iray hafa mety hitranga aminy dia ny aretin'ny otrikaretina, izay tokony hotsaboin'ny mpitsabo biby.
Etsy ankilany, ny boatin'ny fako saka dia tsy maintsy madio foana. Noho izany dia ilaina ny manala ny fisotrony sy ny diky isan'andro, ary diovina tsara indray mandeha isan-kerinandro.
Ahoana no hikarakarana saka jamba
Katarakta amin'ny saka: antony, soritr'aretina ary fitsaboana